‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास बजेट मन्त्रीकै जिल्लामा’ - Hariyo Nepal
Home अन्तर्वार्ता ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास बजेट मन्त्रीकै जिल्लामा’
महेशदत्त जोशी कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को (क)बाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेवारी दिएपछि मत माग्न गाउँ–गाउँमा पुग्नुभयो । चुनावको क्रममा तपाईले स्थानीयलाई धेरै आश्वासन दिनु भएको थियो । तपाई प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि यहाँ के–के गर्नु भयो ?
– २०७४ साल मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा म यस क्षेत्रबाट निर्वाचनमा सहभागि भए । त्यो निर्वाचनमा मलाई यहाँका जनताले अत्यधिक मतले विजयी गरायो । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वडा नं. ७, ८, ९ र ११ तथा कृष्णपुर नगरपालिका पुरै पर्छ । यो क्षेत्रमा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । प्रत्योक वडामा सडक ग्राभेल, स्तरोउन्ती, सडक कालोपत्रे भइरहेका छन् ।
यहाँ नयाँ बाटा समेत खुलेका छन् । यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको लगानीमा उपभोक्ता समिति तथा ठेक्कामार्फत विकास निर्माण भइरहेको छ । स्थानीय पालिकाहरुले सडक निर्माणमा जोड दिएका छन् । हामी निर्वाचित भएपछि यहाँका नदी कटानी हुने क्षेत्रमा तटबन्ध भएको छ, भइरहेको छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र नदी कटानी उच्च जोखिममा छ । यहाँको स्याली, बनहरा, सुनबरा मछेली र महोना नदीले प्रत्येक वर्ष खेतीयोग्य जमिन कटान गर्छ । त्यो समस्या समाधानका लागि तटबन्धको काम भइरहेको छ ।
तपाईको पहलमा शिक्षा क्षेत्रमा के काम भए ?
– विद्यालयका भवनहरु बनेका छन् । विद्यालयलाई भौतिक सुविधा सम्पन्न बनाइरहेका छौं । विद्यालयलाई प्रविधिसँग जोडिएको छ । विद्यालयमा धेरै सुधार भएको छ । प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य संस्था बनाउने योजना अनुरुप प्रदेश सरकारको लगानीमा भवन निर्माण गरिएको छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा २ स्वास्थय चौकी छन् । ती स्वास्थ्य चौकीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण थप गरिएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक पर्ने उपकरणहरुको समेत व्यवस्थापन गरेका छौं । विकास निर्माणका काम धेरै भएका छन् । जनतामा माग, समस्या धेरै छन् । सबै माग तथा समस्या एकै पटक समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन् । जनताका आवश्यकताका आधारमा समस्या समाधान गरिरहेका छौं ।
कृषि क्षेत्रमा के–के काम गर्नुभयो ?
– कृषिमा यो क्षेत्र आत्मनिर्भर भएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका केरा पोकेट क्षेत्र तोकिएको छ । केरा पकाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा कृष्णपुर नगरपालिकाको गुलरियामा च्याम्बर निर्माण गरिएको छ । अहिले किसानले उत्पादन गरेको केरा पकाउन तथा बिक्रि वितरण गर्न सहज भएको छ । फलफुलमा समेत यहाँका किसान आत्मनिर्भर भएका छन् । किसानलाई सिचाइँको व्यवस्था गरेका छौं । तरकारी उत्पादन भइरहेको छ ।
कृष्णपुर नगरपालिका–६ को बालुवाफाँटाको नाम नै परिर्वतन गरेर तरकारीफाँटा राखिएको छ । त्यहाँ अर्गानिक तरकारी खेती मात्रै हुन्छ । त्यो गाउँलाई नमूनाको रुपमा विकास गरिरहेका छौं । कृष्णपुर नगरपालिका–७ मा पनि किसानहरुले तरकारी खेती गरिरहेका छन् । त्यहाँ भुमिगत सिचाइँको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पनि सरकारले लगानी गरेको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–१ मा किसानहरुले व्यवसायीक रुपमा बाख्रापालन गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । प्रदेश सरकारले बंगुर पालन, भैसीपालन गर्ने किसानलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र आरक्ष पीडितका समस्या समाधान गर्ने तपाई अनि तपाईको पार्टीको प्रमुख चुनावी एजेण्डा थियो । उहाँहरुको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । कहीलेसम्म उनिहरुलाई आश्वासन दिनु हुन्छ ?
– यस निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्तकमैया, मुक्त हलिया र आरक्ष पीडितहरुको बसोबास छ । धेरैसँग लालपुर्जा छैन् । उनिहरुसँग जग्गा छ तर लालपुर्जा छैन् । यो समस्या यहाँको प्रमुख सस्या हो । यो समाधानका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध ग¥यौं । केन्द्र सरकारले भुमि ऐन, नियमावली पारित गरेको छ । सरकारले भुमि आयोग समेत बनाएको छ । भुमि आयोगले अब प्रदेश र जिल्लामा समिति बनाएर नापि गर्ने कुरा अगाडी बढेको छ ।
कृष्णपुर नगरपालिकाबाट नै नापि सुरु गर्ने भुमि आयोगले निर्णय गरेको छ । यसैवर्ष शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकामा नापि हुन्छ । भुमि आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्छ । यहाँका स्थानीयले पालिकामा मार्फत जग्गाको लालपुर्जा पाउँछन् । अहिले आयोगले आन्तरिक काम गरिरहेको छ । अबको १ वर्षभित्र परिणाम देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयमा स्थानीय पालिकाहरुको सहयोग कस्तो पाउनु भएको छ ?
– प्रदेश सरकारको लागनीमा गरिने काम तथा विकास निर्माणका योजनाबारे स्थानीय पालिकाहरुलाई जानकारी गराउँछौं । स्थानीय पालिकाहरुले कतिपय कामहरु गरिरहेका छन् । ठूला योजनाहरु प्रदेशका डिभिजन कार्यालयहरुमार्फत भइरहेका छन् । स्थानीय पालिकाहरुको सहयोग पाइरहेका छौं ।
स्थानीयस्तरबाट माग हुने योजनाहरु के–के हुन् ?
– जनताले खासगरी बाटो निर्माण, तटबन्ध, सिचाइँ, खानेपानी, विद्यालय भवनका लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासका योजना माग गर्छन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य शिक्ष, रोजगारी र सीपमुलक कामहरुको माग भइरहेका छन् । सीपमुलक कार्यक्रम सहकारी मार्फत गर्ने योजना बनाएका छौं ।
कोरोनाले विकास निर्माण के–कस्तो प्रभाव ग¥यो ?
– कोरोनाले विकास निर्माणमा धेरै प्रभाव पा¥यो । अहिलेपनि केही ठूला योजनाको काम ठप्छ । केही योजनाको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर काम भइरहेको छ । सरकारको नियम कानुन अनुसार काम भइरहेको छ । अहिले कोरोनाको कारण विकास निर्माणका काम गर्ने मिस्त्री तथा कामदारहरुको जीवनयापनमा समेत प्रभाव पारेको छ ।
कोरोनाका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरु घर फर्किएका छन् । यहाँ बसोबास गर्ने नागरिक पनि अहिले काम नपाएर बेरोजगार अवस्थामा छन् । उनिहरुलाई रोजगारी दिनका लागि के छ योजना ?
– बेरोजगार तथा विदेशबाट घर आएकाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा जोड्ने योजना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको छ । व्यक्तिगत तथा समुहमा काम गर्ने युवाहरुलाई सरकारले अनुदान, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । बेरोजारहरुलाई रोजगारीसँग जोड्नका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका ठूला योजनाको काम ढिलासुस्ती भइरहेको पाइन्छ । किन विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन्छ ?
– प्रदेश सरकारसँग अहिलेपनि प्रयाप्त कर्मचारी छैन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरु प्राविधिकहरुको अभाव छ । कर्मचारी नहुँदा समेत विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । केही विकास निर्माणमा निर्माण व्यवसायीहरुले समेत ढिलासुस्ती गरिरहेको देखिन्छ ।
तपाईको निर्वाचन क्षेत्र प्राकृति तथा पर्यटनको हिसाबले सम्पन्न छ । यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ ?
– मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मणिकाधाम, बतासे झरना, निल ताल, ग्वासी धाम, लालझाडी संरक्षित क्षेत्र, शुक्लफाँटाको कृष्णसार क्षेत्र पनि यहाँका पर्यटकीय क्षेत्र हुन् । अहिले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । अहिले हामीहरुले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छौं । कृष्णपुर नगरपालिकामा विजयसाल हामस्टे सञ्चालन गरिएको छ । विजयसाल बहुउपयोगी जडीबुटी हो । यो संरक्षणमा यहाँका सामुदायिक वनहरुले काम गरिरहेका छन् ।
पर्यटकीय रुपमा यो क्षेत्रलाई विकास गर्न हामी काम गर्दै आएका छौं । बनहरा नदी किनारमा आर्यघाट निर्माण गरिएको छ । त्यसको डिपीआर प्रदेश सरकारको लगानीमा गरिएको हो । त्यसको निर्माणका लागि प्रदेशबाट नियमित बजेट आइरहेको छ । यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
किसानले उत्पादन गरेका तरकारीले अहिले पनि बजार पाउँदैन । यो समस्या समाधानका लागि के पहल हुँदैछ ?
– यहाँका किसानले प्रसस्त मात्रामा तरकारी उत्पादन गर्छन् । पछिल्लो समय बजारको समस्या देखिएको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको समाग्री बिक्रिवितरणका लागि हाट बजार निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको बिचमा हाट बजार निर्माण गर्न दुबै पालिकाहरुले काम गरिरहेका छन् । अहिले सहकारीहरुको सहकार्यमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी संकलन गरेर बजारसम्म पुगाउने व्यवस्था गरेका छौं । यहाँको तरकारी महेन्द्रनगर, धनगढी तथा पहाडी जिल्लामा निर्यात भइरहेको छ ।
यस क्षेत्रको विकास निर्माण प्रदेश सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
– कञ्चनपुर जिल्लाबाट ६ जना सांसद सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा छन् । सबै सांसद नेकपाका छन् । कञ्चनपुरका ६ जनामध्ये १ जनाले पनि मन्त्री पद पाएको छैन् । अहिलेसम्मको जो मन्त्री भयो, उसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बढी बजेट लग्ने गरेको देखिन्छ । मन्त्री भयो भने त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट पर्छ ।
१५/२० करोड विकास बजेट मेरो निर्वाचनमा पाउनुपर्ने हो तर त्यो पाइरहेको छैन् । प्रदेशसभा बैठकमा कराए, मन्त्री ज्यूलाई भन्दा समेत बजेट प्रयाप्त पाइरहेका छैनौं । बजेट बाडफाड सरकारले हो गर्ने, त्यसैले पनि मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा बजेट बढी गएको देखिन्छ । कञ्चनपुरमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु नभएकाले यहाँ न्यून बजेट पर्छ । त्यसैले मेरो क्षेत्रमा थोरै बजेट पर्छ । त्यही थोरै बजेटलाई सही सदुपयोग गरेर काम गरिरहेका छौं ।